ओली–रावल टकराबः रावलको चिठीपछि ओली भन्छन्ः मास्क खोल्नुस् भन्न चिठी लेख्नुपर्छ? - Dainik Online Dainik Online
ओली–रावल टकराबः रावलको चिठीपछि ओली भन्छन्ः मास्क खोल्नुस् भन्न चिठी लेख्नुपर्छ?
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ६ : ५२
काठमाडौं। नेकपा एमालेले शुक्रबार महाधिवेशनको मापदण्ड र कार्यतालिका पारित गर्न भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेको थियो।
तर, बैठकमा माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका नेता प्रभु साह निकट दुई नेतालाई एकाएक केन्द्रीय सदस्यको शपथ खुवाइयो।
एमाले अध्यक्षको ओलीको यो कार्यशैली उपाध्यक्ष भीम रावललाई पचेन। उनले बैठकमा शपथ देखेर अन्योलमा परेको प्रतिक्रिया जनाए।
मञ्चमा बसेका ओलीले शपथ खुवाइसकेसँगै बैठक सुरु भयो। बैठकमा एमाले कैलालीका नेता झपट रावलले १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको र कैलालीमा मापदण्ड पालना नगरीकनै पार्टी सदस्यता वितरण गरेको भन्दै संगठन विभाग प्रमुखलाई लेखेको पत्र बैठकमा पेस गरे।
१० बुँदे सहमतिलाई ‘रटान’ भन्दै आएका ओली त्यसपछि आक्रोशित देखिए। बैठकमा महाधिवेशन तयारीलगायतका विषय उठान गर्दै ओलीले रावलको चिठीप्रति व्यंग्य मिश्रित आक्रोश पोखे।
छेवैमा बसेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीतिर हेर्दै भने, ‘युवराजजी मास्क लगाएर बस्नुभएको छ, अब उहाँलाई मास्क खोल्नुस् भन्नुपर्‍यो भने पनि चिठी लेखिहाल्नेरु’
उनले नेताहरूमा चिठी लेख्ने मोह बढेको भन्दै असन्तुष्टिलाई बैठकमा स्पष्ट राख्न पनि भनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
चिठी प्रकरणमा बोलिसकेपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम देखेर रिसाएर बसेका भीम रावलमाथि खनिए ओली। उनले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन नसकेर राजीनामा दिएको बताउँदै अब महाधिवेशन मुखमा आइसकेको भन्दै १० बुँदेको औचित्य सकिएको बताए।
अध्यक्ष बोल्दाबोल्दै रावलले ‘हैन कमरेड’ भन्दै रोक्न खोजे। तर, ओली रोकिएनन्। रावलले असन्तुष्टि राख्न थालेपछि अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले १० बुँदे एजेण्डा स्थायी कमिटीमा भएको भन्दै सोही कमिटीको बैठकबाट मिलाउन भनेपछि रावल चुप लागे।
त्यसलगत्तै ओलीले केन्द्रीय सदस्यको सुझाव र स्थायी कमिटीको पनि सुझाव आएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाउने एजेण्डा पारित गर्नु उपयुक्त हुने बताए। उनको यो एजेण्डामा सबैको सहमति जुटेपछि शुक्रबार बसेको बैठक सकिएको ती नेताको भनाइ छ।